प्राधिकरण पूर्वाग्रही कि पाइलट विजय लामा अनुशासनहीन ? विजय लामाको न्यायको लागि एक सेयर गरौ – " कञ्चनजंगा News "
प्राधिकरण पूर्वाग्रही कि पाइलट विजय लामा अनुशासनहीन ? विजय लामाको न्यायको लागि एक सेयर गरौ
No Comments on प्राधिकरण पूर्वाग्रही कि पाइलट विजय लामा अनुशासनहीन ? विजय लामाको न्यायको लागि एक सेयर गरौ
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका ‘सेलिब्रिटी पाइलट’ विजय लामा निलम्बनमा परे भनेर सोमबार दिउँसो केही अनलाइनमा समाचार आए । लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लामाको बचाउमा स्टाटसहरु ह्वार्रह्वार झर्न थाले । यद्यपि, त्यो खबर पूर्ण सत्य थिएन ।
समाचारमा आएजस्तो लामाको लाइसेन्स निलम्बन भएको नभएर उनी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मात्रै हटाइएका थिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘तपाईंलाई तत्कालैदेखि लागू हुने गरी हाल सम्हालिआउनुभएको प्रवक्ताबाट हटाइएको’ उल्लेख छ । यो पनि एकप्रकारको कारवाही नै हो, तर निलम्बनजस्तो गम्भीर होइन । त्यसोभए, निलम्बनको समाचार कसरी आयो त ?
खासमा सोमबार नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले लामालाई एउटा पत्र पठाएको थियो, जसमा उनले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्दा उडान सुरक्षा प्रभावित बन्ने तर्क गर्दै पाइलट र प्रवक्तामध्ये एउटा जिम्मेवारी छोड्न भनिएको छ । प्राधिकरणको पत्रमा लामालाई ‘अनुशासनको कारवाही’ गरिएको झल्किँदैन । प्राविधिक अप्ठेरो देखाएर एउटा जिम्मेवारी छोड्न भनिएको छ । तथापि, यो प्रकरणको चुरो भनेको लामाबाट भएको ‘अनुशासन उल्लंघन’ नै हो ।
तर, यात्रुहरु मिसप्लेस हुँदा केही ढिलाइ भयो । समाचारमा आएअनुसार, निगमको दोहा जानुपर्ने यात्रु र दुबई जानुपर्ने यात्रु अलमलमा गलत जहाजमा बस्न पुगेका थिए । उनीहरुलाई सार्ने क्रममा केही समय गुज्रियो । यात्रुहरु ९ः३५ बजे मात्रै सही विमानमा बसे । त्यसपछि बिमानमा इन्धन राखियो । ९ः४५ मा इन्जिनियरिङ टिमले उडानका लागि अनुमति दियो र बिमानका सबै ढोका बन्द गरिए । अनि, बल्ल पाइलटले एटीसीसँग उडान अनुमति मागे ।
तर, निगमको जहाजभन्दा अगाडि ड्रागन एयरको वाइडबडी जहाजले अनुमति पाइसकेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सले यात्रु चढाउन थालेपछि ९ः१० मा हङकङबाट क्याथे ड्रागन ल्यान्ड भएको थियो । उसले यात्रु उतारेर यताका यात्रु फटाफट चढायो । ड्रागन एयरको जहाज रनवेमा जाँदा निगमको जहाज ट्याक्सी वेमै थियो । ड्रागनका कारण बोर्डिङ गरिसकेको निगमको जहाजलाई रन वेमा जान केही मिनेट ढिला भएको थियो । दुईवटा वाइडबडी एकैपटक रन वेमा लैजान मिल्दैन । र, ड्रागन ९ः५७ मा तीन सय ५ यात्रु लिएर उडिहाल्यो । तर, निगमको बिमान हेरेको हेर्‍यै भयो । १० बजेपछि विमानस्थल बन्द भएको भन्दै कन्ट्रोल टावरले निगमको जहाजलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने बताइदियो ।
निगमका प्रवक्ता लामाले आफ्नो पाइलटले उडानका लागि ४ मिनेटको समय माग्दा पनि एटीसीले नदिएको बताएका छन् । विमानस्थल प्रशासनले भने १० बजे विमानस्थल बन्द भएपछि मात्रै अनुमति मागिएको दाबी गरेको छ । रातभर यात्रुलाई धावनमार्गमा रहेको विमानभित्र राखिनु यो एउटा गम्भीर घटना हो । यसमा नागरिक, निगमका पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर दुवैतर्फको कमजोरी रहेको भनेर सरकारद्वारा गठिन छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा एटीसीमा रहेका कर्मचारीले मानवीय हिसाबले परिपक्व निर्णय लिन नसकेको ठहर्‍याइएको छ भने बिमानस्थलमा भएका निगमका कर्मचारीले सञ्चार समन्वयमा कमजोरी गरेको जनाइएको छ ।
लामाको यो अन्तरवार्ता प्रशारण भएपछि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा छलफलको विषय बनेको थियो । त्यसपछि वैशाख ४ गते प्राधिकरणले लामालाई स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीकरण पत्रमा पनि पदीय मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएको वा अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप भने लगाइएको छैन । अन्तरवार्तामा लामाले आफू थकित र तनावग्रस्त हुने भनेर बोलेको विषयलाई इस्यू बनाइएको छ । तनाव र थकानमा रहने पाइलटले कसरी सुरक्षित उडान गर्न सक्छ भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।
प्राधिकरणले लामालाई सोमबार पठाएको दोस्रो पत्रमा उनले दिएको प्रष्टीकरणप्रति असन्तोष व्यक्त गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘तपाईंले पठाउनुभएको स्पष्टीकरण पत्र असान्दर्भिक हुनुका साथै अतार्किक पनि छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एटीपी लाइसेन्सबाहेकका रुपमा तपाईं नेपालको नागरिक उड्ययनसँग सम्वन्धित नियमहरुका बारेमा जानकार हुनैपर्छ । एउटा लाइन क्याप्टेनका रुपमा तपाईंले प्रवक्ताको अतिरिक्त सांगठिनक भूमिकाको औचित्य सावित गर्न सक्नुभएन, जसले सुरक्षित उडानलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।’ प्राधिकरणको पछिल्लो पत्रपछि लामाले खासै प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् । अनलाइनखबरसँग उनले आफू यस विषयमा दुई दिनपछि बोल्ने बताए ।
पछिल्लो कारवाहीपछि सामाजिक सञ्जालमा लामाप्रति जनसमर्थन देखिएको छ । धेरैले उनीमाथि चालिएको कदमलाई आलोचना गरेका छन् ।
लामा कति सही ?
विगत ३२ वर्षदेखि निगममा सेवारत लामा नवौं तहका वरिष्ठ क्याप्टेन हुन् । उनी एयरबसको वाइडबडी बिमान उडाउँछन् । लामाले अमेरिकाको टेक्सासबाट उनले पाइलट कोर्स गरेका हुन् । उनी मल्टिइञ्जिनसम्मको लाइसेन्स लिएर १९८७ मा नेपाल फर्केका थिए । सोही वर्षको जून १ बाट उनले आरएनएसीमा कोपाइलटको जागिर सुरु गरेका हुन् ।
कोपाइलटबाट सुरु गरेका लामा क्रमशः क्याप्टेन, इन्स्ट्रक्टर, चिफ पाइलट, सुपरभाइजर, सुपरीटेन्डेन्ट, ग्राउन्ड इन्स्ट्रक्टर, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्स्ट्रक्टर र डेपुटी डाइरेक्टर भए ।
सामाजिक सञ्जालमा र अन्तरवार्तामा आफ्ना धारणा प्रकट गरिरहँदा उनी आफू एक जिम्मेवार सरकारी जागिरे हुँ भन्ने बिर्सिदिन्छन् ।
केही वर्षअगाडि नेपाल एयरलाइन्सले उनीसहित केही पाइलटलाई एयरबसको तालिमका लागि फ्रान्स पठाएको थियो । एनएसीसँग रहेका थोरै एयरबस कमाण्डरहरुमध्ये लामा एक हुन् ।
पहिलेका फिल्मी हिरो पनि भएकाले लामालाई धेरै नेपालीले चिन्छन् । साथै प्रष्टवक्ता र निर्भिक स्वभावका उनी बेलाबखत आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण पनि चर्चामा आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय उनले देशप्रेमी नागरिकको छवि बनाएका छन् ।
उनी सामाजिक सञ्जालमा विविध विषयमा आफ्नो खुल्ला असन्तुष्टि पोख्ने गर्छन् । केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री छँदा उनले लेखेको एउटा स्टाटस निकै चर्चामा आएको थियो । ओलीले निजी क्षेत्रको विमानमा चीन भ्रमणमा गएको विषयलाई लिएर लामाले निराशा व्यक्त गरेका थिए ।
लामाले लेखेका थिए, ‘के बस्नु यस्तो देशमा, जहाँ नेताहरुले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कदर गर्न जान्दैनन् । धिक्कार्छु आफ्नो कर्मलाई, यस्तो अवस्था आउँदा पनि केही गर्न नसक्दा ।’
गत ४ पुसमा निगमले लामालाई निगमको प्रवक्ता नियुक्त गरेको थियो । निगमले एउटा पाइलटलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनु व्यवहारिकरुपमा अनुपयुक्त थियो । प्रवक्ताको भूमिकाका लागि लामा अयोग्य होइनन् । तर उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी निभाउन भने सहज थिएन । प्रवक्ता हरेक समय सञ्चार माध्यमको पहुँचमा हुनुपर्छ । तर, उनी आफैं विमान उडाउने भएकाले प्रायः सम्पर्क गर्न कठिन हुन्थ्यो ।
प्रवक्ताले आफ्नो संस्थाको हितमा बोल्नु/लेख्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि लामाले नेपाल एयरलाइन्सलाई हृदयदेखि माया गर्छन् । निगमपछि उनको समर्पणभाव अतुल्य छ । तथापि, कहिलेकाहीँ उनको अभिव्यक्तिमा बढी आक्रामकता र भावुकता पनि छल्किन्छ । सामाजिक सञ्जालमा र अन्तरवार्तामा आफ्ना धारणा प्रकट गरिरहँदा उनी आफू एक जिम्मेवार सरकारी जागिरे हुँ भन्ने बिर्सिदिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने समर्थनले उनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
सरकारी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि विवादित विषयमा मुख खोल्दा निकै सोच्नुपर्छ । तर, लामाले भने बेहिच्किचाहट एनसेलको कर विवाददेखि वाइड बडी भ्रष्टाचार प्रकरणसम्म प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक उनले एनसेलको सिम बहिस्कार गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए ।
अनुभवी र दक्ष पाइलट लामा नेपाल एयरलाइन्सका सम्पत्ति मात्र होइनन्, देशकै गौरव हुन् । उनीबाट अझै परिपक्व व्यवहार अपेक्षित छ ।
जातीय रंग दिने युवराज लामाको प्रयास
विजय लामालाई कारवाही गरिएको खबर सार्वजनिक गरिएसँगै एकाध व्यक्तिहरु यसलाई जातीय रंग दिने प्रयासमा लागेका छन् । आङ्काजी शेर्पाको त कुरा नगर्दा भयो, तर उनलाई पछ्याउँदै युवराज लामाले पनि स्टाटस लेखेपछि यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनैपर्ने भएको छ ।
लामो समय नेपाल खेलकुद परिषदको कमाण्ड सम्हालेका युवराजले विजय लामामाथिको कारवाहीलाई ‘नस्लवादको भद्दा नमूना’ भन्दै एउटा सक्षम तामाङमाथि राज्यको प्रत्यक्ष र परोक्ष विभेदकारी श्रृंखलावद्ध प्रक्रिया र स्वर्गीय आइजीपी डीबी लामा प्रकरणको निरन्तरताका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यति मात्र होइन, युवराजले अब कुलमान घिसिङले समेत सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले विजय लामाप्रति सम्पूर्ण नेपालीहरुको सद्भाव र सहानुभूति छ । उनी कुन जातका हुन् भन्नेसँग कसैको चासो छैन र यो चासोको विषय पनि होइन । तर, युवराज लामाले यसलाई जातीय भड्काव दिएर आफ्नो कुटिल र संकुचित सोचलाई उजागर गरेका छन् ।
सम्वन्धित निकाय सचेत बन्ने हो भने युवराजको स्टाटस साइबर क्राइमको विषय बन्न सक्छ । पाँच वर्षसम्म मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली मानिने खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव खान के युवराज लामालाई जातले रोकेको थियो ?
← मुख्यमन्त्री पोखरेललाई लक्ष्य गरी फेरि बम विस्फोट ! → इन्टरनेट सेवा शूल्क घटाउने गरी दुरसञ्चार ऐन आउँदै